Shiinaha HSG01-E Taxanaha Haydarooliga dhululubada warshad iyo soosaarayaasha | Xinrun
HSG injineernimada nooca injineernimada waa silsilad laba nooc oo silsilad hiddo ah oo hidde ah, taas oo leh astaamaha qaab-dhismeedka fudud, hawlgal lagu kalsoonaan karo, isku-habboonaanta iyo kala-goynta, dayactirka fudud, qalabka keydka iyo habab kala duwan oo xiriir ah. Waxaa inta badan loo isticmaalaa mashiinada dhismaha, gaadiidka, rarka, mashiinada wiishka, mashiinada macdanta iyo warshadaha kale.
Cilmi baaris iyo Naqshadeyn
Shirkaddayada 1.Our waxay leedahay injineero 6 ah oo leh 20 sano, 40 sano oo khibrad farsamo ah.
Dhululubada 2.Hyd Haydarooliga ah ayaa si aad iyo aad ah loo isticmaalaa warshadaha injineernimada farsamada, iyo shuruudaha farsamo ayaa sidoo kale ka sareeya oo ka sareeya. Badanaa waxay isticmaashaa nooc cadaadis dhameystir ah si ay u sameysato astaamaha birta ah ee astaamaha caagga ah ee heerkulka caadiga ah. Isticmaalka qalabka rogista waa in cadaadis gaar ah la saaro dusha sare ee badeecada, si markaa birta dusha sare ee badeecada ay u yeelato waxqabad caag ah, una buuxiso dooxada hoose ee hoose ee haraaga bilowga ah, si loo sameeyo wax soo saarka shaqada. Qiimaha xun ee badeecada ayaa yaraaday. Cilad darrada caagga ah ee birta dusha sare ku leh cadaadiska Haydarooliga, adkaanta qabowga ee lakabka dusha sare iyo hagaajinta miraha ayaa sameeya qaab saxan oo sax ah. Awoodda iyo adkaanta lakabka walbahaarka haraaga ah waa la hagaajiyay, sidaas awgeed waxay hagaajineysaa caabbinta daxalka iyo xirida iska caabinta alaabada shaqada.
3.Qorshe qoraaleedka silsiladda korontada ku shaqeeya:
a. Isticmaalka qalabka, xaaladaha shaqada.
astaamaha qaabdhismeed ee farsamaynta shaqada, xaaladda xamuulka, shuruudda xawaaraha, cabirka istaroogga iyo shuruudda tallaabo.
c.The cadaadiska shaqada ee la doortay ee nidaamka Haydarooliga.
4.Waxaan ka dhigi karnaa dhululubo sida ku xusan astaanta macaamiisha.
5.Olinder dhululubo ah wuxuu leeyahay noocyo badan, wuxuu sameyn karaa iyadoo loo eegayo macaamiisha kasta 'shuruudaha, faahfaahinta iyo sawir.
Mashiinnada Haydarooliga waxaa loo adeegsadaa gaadiid-qaadayaasha, mashiinka wax lagu rakibo, kuwa beeraha soo goosta, qodaalka hawo-soo-saarka hareeraha beeraha, madal qaadista.
Hore: Dhulgariir dhululubada dhululubada
Xiga: Silsilad Haydarooliga Hawada
Silsilad laba-jilib Telescopic Haydarooliga
Silsiladda Hsg Hydraulic
Hees Heesta Telescopic Haydarooliga
Kalluumeysiga Hawada Kali ah